Posted by coral nyo at 04:46
ဂလု . . .
စားချင်လိုက်တာ . . .
သူ့ဟာသူစောင်းတာ ငါ့ဆွဲထည့်တယ် ဟွန့်
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ မျက်ခုံးလှုပ်နေတာ
ကြက်ဥကြော်မိုးတဲ့ ပဲထမင်းဆီဆမ်းကို သွားရည် ကျသွားတယ်ဗျာ..၊ အမဲကြော်နဲ့ဆို ဘာပြောကောင်းမလဲ...။
နေပြည်တော်အမြန်ဆုံးခရီးဆိုပေမယ့် ရတဲ့အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချခဲ့တာ လေးစားစရာ... :)
မန်းကျည်းရည်လေး သောက်ချင်လိုက်တာ။ ထမင်းဆီဆမ်း အမဲကြော်လေး ၀ါးလိုက်ရရင်ဖြင့် ... အင်း။။။။။။။။။။။။။
hta min kyaw nae` fried egg... :(((
sarr chin tal....
ပဲထမင်းကို တွေ့ တော့ ကျောင်းသားဘဝကို အမှတ်ရမိတယ်။ နေပြည်တော်ကို မရောက်ဖူးသေးဘူး။ ဒီတခါပြန်မှ တစ်ခေါက်လောက်တော့ သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
အစားအသောက်ကတော့ ရှယ်ပဲဗျာ။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားလို့ပဲ။ အပျော်သာသွားရင်ဒီထက်ပိုရှယ်မယ်ထင်တယ်နော်။ YKKO ကတော့ မပြောတော့ပါဘူး။